म कुनै हालतमा राजीनामा दिन्नँ, मैले राजीनामा दिए देश बर्बादीतिर जान्छः प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित) – Himalaya Television
म कुनै हालतमा राजीनामा दिन्नँ, मैले राजीनामा दिए देश बर्बादीतिर जान्छः प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित)
२०७७ कार्तिक १९ गते १४:३४
१९ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
तपाईहरु विचार गर्नुस् के अहिले मैले राजीना दिन हुन्छ ? राजीनामा दिन मिल्छ ? मेरा लागि होइन देशका लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन् । त्यो मैले दोहोर्‍याएर भनेको छु फेरी केहीले खोइत राजीनमा भनेर मागिराखेका छन् । बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु ।
उहाँले भन्नुभयो ‘म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन जनताको आवश्यकता र समर्थनले हो । यहाँ पुर्‍याएको म जालझेल तिकडमबाट होइन । यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट हो । त्यसकारण तपाईहरु ढुक्क भएर काममा लाग्नुस् । यो सरकार फेरिन्छ कि बदलिन्छ कि धेरैले धेरैपल्ट धेरै प्रकारका कोशिसहरु गरे । भित्र, बाहिर अनेकथरिका कोशिसहरु आए । जेमा पनि आलोचना गर्ने, जेमा पनि आलोचना गर्ने । त्यस प्रकारका प्रवृतिहरु छन् त्यसबाट प्रभावित नहौं ।’
ओली देश परिस्थिति प्रधानमन्त्री राजीनामा